Barnaamijyada Beesha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka > Barnaamijyada Bulshada
Ku xidhnow adeegyada bulshadaada si aad uga caawiso baahiyaha nolol maalmeedka.
Tayada caafimaadkeenu waxay ka bilaabataa meelaha aan waqtiga badan ku qaadno, sida guryaheena, goobaha shaqada, ama iskuulada. Caafimaadkeenu wuxuu kaloo kuxiranyahay ilaha aan nolol maalmeedkeena kaheleyno, oo ay kamid yihiin cunnooyinka caafimaadka qaba, gaadiidka lagu kalsoonaan karo, taageerada bulshada, helitaanka waxbarashada, shaqada, iyo daryeelka caruurta. Qofka si wax ku ool ah u maareeya xaaladdooda caafimaad isla markaana u ilaaliyo qaab nololeed caafimaad leh, waa inuu marka hore helo marinkan ilaha aasaasiga ah.
Kooxda Barnaamijyada Beesha (oo markii hore loo yiqiin kooxda isku xirka bulshada) ayaa kugu xiraya barnaamijyada iyo adeegyada bulshadaada si ay kaaga caawiyaan baahiyahaaga maalin kasta. Kooxdayadu waxay ka kooban yihiin khabiiro ku takhasusay dhinacyada guryaha, fayoobaanta iyo soo kabashada, caafimaadka guud iyo adeegyada bulshada. Kooxdayada waxay ku taageertaa xubnaha hadafyadooda shaqsiyadeed si loo wanaajiyo caafimaadkooda iyo fayoobaantooda.
Baahiyaha aasaasiga ah waxaa ka mid noqon kara wax kasta oo ka yimaada cuntada iyo dharka ilaa waxyaabaha daryeelka gaarka ah iyo yutiilitida Wax kasta oo aad ugu baahan tahay si aad ugu noolaato nolol maalmeedkaaga waxaa loo tiriyaa baahi aasaasi ah. Hubinta in baahiyahaaga aasaasiga ah la daboolay ayaa aasaas u ah caafimaadka wanaagsan.
Waxaa laga yaabaa inaan ku caawin karno haddii aad dhibaato ku qabtid helitaanka ama dayactirka mid ka mid ah baahiyahaaga aasaasiga ah. Shaqaalaheennu waxay kugu xiri karaan hay'adaha adeegga tooska ah ee bulshadaada sida bangiyada cuntada ama hoyga.
Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaad buuxiso codsiyada iyo inaad dabagal la sameyso hay'adaha kale. Tusaale ahaan, haddii ay dhibaato kaa haysato bixinta cuntada, xubin ka mid ah shaqaalaha ayaa kaa caawin kara sidii aad u codsan lahayd barnaamijka nafaqada ee dheeraadka ah ee SNAP. Waxay la socon karaan horumarka dalabka. Ogaanshaha inuu jiro qof kaa caawinaya inaad dib ugu istaagto cagahaaga ayaa kaa caawin kara waxyaabaha inay sahlanaato.
Gaadiid badbaado leh, oo la isku halleyn karo oo ka imanaya ballamaha caafimaadka ayaa ah mid ka mid ah siyaabaha aan ku taageeri karno xubnaha. Gaadiidka waxaa lagu dari karaa faa iidooyin qorshayaal xul ah. Waxaan xubnaha ku xireynaa adeegyada gaadiidka aaggooda gaarka ah, xitaa waan ka caawin karnaa diyaarinta raacitaannada.
Haddii aad u baahan tahay gaadiid sababo kale oo aan ka ahayn ballanta dhakhtarkaaga ama aad u baahan tahay raacitaanno si aad u hesho raashin, waxaan kugula xiriiri karnaa ururro si gaar ah uga caawiya waayeelka baahiyahaan.
Ikhtiyaar kale ayaa ah foojarrada gaadiidka, oo dabooli kara qiimayaasha gaadiidka dadweynaha ama lacagta gaaska. Foojarradani waxay ku siin karaan fursad aad ugu safri kartid jadwalkaaga adigu. Haddii aad qabtid baahiyo ama walaac kale oo la xiriira gaadiidka, la hadal xubin ka mid ah kooxda oo arag ilaha jira ee la heli karo.
Guri ammaan ah, oo la awoodi karo ayaa baahi aasaasi ah u ah qof walba, laakiin qof kastaa ma haysto. Waxaan u fidinaa taageero kuwa soo food saaray dhibaato xagga guryaha ah ama ka walaacsan xaalada guryahooda. Raadinta guryo la awoodi karo way dhib badan tahay waxaana halkaan u joognaa inaan kaala hadalno xulashooyinkaaga kuwaasoo noqon kara deg-deg deg deg / hoy, guryo dakhligoodu hooseeyo, guryo ku-meelgaar ah ama guriyeyn waayeel ah.
Waxaan kaa caawin karnaa codsi kasta oo aad u baahan karto inaad buuxiso oo ay ku jiraan codsiyada Qaybta 8. Haddii dhaqaalahaagu ciriiri yahay, waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaad hesho ilo kaa caawinaya bixinta kirada iyo bixinta korontada, waxaana kaa caawin karnaa inaad hesho guryo qiimo jaban oo gurigaaga ah sida rakibidda baararka. Haddii aad khatar ugu jirto in lagaa saaro, waxaan kugu xiri karnaa ilaha kahortagga raritaanka oo waxaan kaa caawin karnaa inaan ka jawaabno su'aalahaaga.
Haddii aad u baahan tahay gargaar oo aadan hubin meesha aad u weecato, shaqaalahayaga Barnaamijyada Bulshada ayaa laga yaabaa inay ku caawin karaan. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan nagala soo xiriir halkan 1-866-418-7006 (TTY 711).
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 15, 2021